Qarax xooggan oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay Baydhaba – Benaadir News Network
Qarax xooggan oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay Baydhaba
Baydhabo (Benaadir News) – Faah-faahino dheeriya ayaa kasoo baxaya qarax dhimasho sababay oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
Qaraxa ayaa ka dhacay suuqa qaadka lagu iibiyo ee bartamaha magaalada Baydhabo, xili ay ka taagneyd saxmad aad u badan, sida ay Benaadir News u sheegen dad goobjoog ah.
Qaraxa oo la dhigay goobta Suuqa ayaa waxa uu sababay dhimashada 3 qof iyo dhaawaca 7 qof kale, sida ay laamaha amaanka inoo xaqiijiyeen.
Khasaaraha dhimashada ayaa saacadaha soo socda kordhi karta, sida ay sheegen mas’uuliyiinta degmada Baydhabo, maadama lasoo warinayo in dhaawacyada ku jiraan qaar aad u culus.
Qaraxa ayaa kusoo aaday xili ay saxmad badan ka jirtay suuqa lagu iibiyo qaadka, illaa haddana ma jirto cid sheegatay mas’uuliyada qaraxaas.
Previous Faahfaahin ku saabsan qarax caawa ka dhacay Muqdisho
Next Xildhibaan Mahad Salaad oo faallo xasaasi ah ka qoray HESHIISKA doorashada